Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कयौं आयोजना अलपत्र हुँदा पाइपलाइन कसरी समयमै सम्पन्न भयो ? – Emountain TV
कयौं आयोजना अलपत्र हुँदा पाइपलाइन कसरी समयमै सम्पन्न भयो ?
काठमाडौं, २५ भदौ । नेपालमा संचालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु वर्षाैवर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसले आयोजना भनेका सरकार र राजनीतिक दलका नाराहरु मात्र हुन कि भन्ने जस्तो भान सर्वसाधरणलाई परेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, हुलाकी राजमार्ग आदि त्यसका ज्वलन्त उदाहारण हुन् ।
यसरी जनतामा निराश छाइरहेको बेला नेपाल भारत संयुक्त परीयोजनाका रुपमा रहेको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईन शिलान्यास भएको ३० महिनामै सम्पन्न हुँदा जनतामा आशा पलाएको छ । दर्जनौ आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेको बेला पेट्रोलियम पाइपलाइन कसरी तोकिएको समय अगावै सम्पन्न भयो ? अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
नेपालको ३० प्रतिशत र भारतको ७० प्रतिशत लगानीमा निमार्ण भएको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको भन्दै दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरी खुशी बांड्नु भएको छ । तत्काललाई हेर्दा यो नेपालको हितमा भएकोले यसलाई सकारात्मक नै लिन सकिन्छ । तर यस्ता कयौं आयोजना छन् नेपाल भारत बिच सझौता भएका र निमार्णाधिन अवस्थामा रहेका । ति आयोजना वर्षाेैदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन समयमा नै सम्पन्न गर्न सक्ने सरकारले वर्षौेदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका परियोजना किन पुरा हुन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । २०५२ सालमा गरीएको महाकाली सन्धीमा नै उल्लेख गरीएको पञ्चेश्वर परीयोजना अझै सुरु हुन सकेको छैन । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना जुन पटक पटक सम्झौता अवधी थप्दा पनि भारतले निर्माण गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै २०४७ सालमा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरद्धारा उद्घाटन भएको हुलाकी राजमार्ग ३० वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेको छैन । तर पाइपलाइर्न ३० महिनामा नै सम्पन्न भयो तर कसरी ?
यि त प्रतिनिधीमुलक आयोजना मात्र हुन् तर नेपाल भारत बिच सम्झौता भएका कयौ आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । वर्षाेदेखि भारत र नेपालको लगानीमा बन्ने भनिएका आयोजनाहरु किन बन्न सकेका छैनन् ? यसले पनि वास्तविकतालाई उजागर गर्ने गर्दछ । बैदेशिक लगानीमा बन्ने आयोजनामा जहाँ विदेशीको फाइदा धेरै देखिएको छ त्यसलाई पुरा गर्न समय नलागेको जानकारहरु बताउँछन् । निर्माणाधिन आयोजनाबाट आफ्नो देशको हित देखिएन भने सम्झौता गरेका आयोजनामा पनि ढिलाई गर्ने परीपाटी रहेको छ ।
तर नेपाल र भारत सरकारले भने यसरी अल्झिएर बसेका सयौं आयोजनालाई बिर्सेर पेट्रोलियम पाइपलाइन समयमा भनेको भन्दै खुसी मनाइरहेका छन् । निर्माण थालिएको आयोजनाहरु किन अलपत्र पर्छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भने निमार्ण गर्ने कम्पनीको क्षमताले पनि आयोजनाहरु अलपत्र हुने बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै कतिपय आयोजनाहरुमा सरकारले पनि स्रोतसाधनको मुल्याङकन नगरी अगाडी बढाउने गरेको हुनाले आयोजनामा ढीलाई हुने समस्या भएको हुनाले यसलाई सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ ।
कतिपय विश्लेषकका अनुसार मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनमा नेपालको भन्दा भारतको इच्छाशक्ति देखिन्छ । तत्कालका लागि यो पाइपलाइन नेपालको हितमा जस्तो देखिए पनि त्यसबाट नेपालले भन्दा बढी भारतका लागी फलदायी भएको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।